ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: တားဆေးများ Emergency Contraception for Female
တားဆေးများ Emergency Contraception for Female
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၄ဝ)
Q 1: Rape case အကြောင်း စပ်မိလို့ ဆွေးနွေးမိရင်း ဒါမျိုး ကြုံရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ်ဝန်ရမလာအောင် လုပ်တဲ့နည်း သိချင်လာလို့ပါ။ မလိုချင်တဲ့ သန္ဒေသားကို ဘာဆေးနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်မလဲ။ မိခင်စိတ် အပြည့်နဲ့ မွေးခိုင်းရမယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်ကျ သူ့လူမှုရေးပြဿနာတွေ ပတ်ဝန်းကျင်က ပစ်ပယ်တာတွေကို လိုက်ရှင်းမပေးနိုင်လို့ပါ။ တောရွာတွေ ဆေးခန်း မရှိတဲ့ တောင်ပေါ်တွေမှာဆို ဂျင်းသောက်ခိုင်းတဲ့နည်းက ဖြစ်နိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Q 2: သမီး အသက်က ၂၂ ပြည့်တော့မှာပါ။ ရာသီလာပြီး လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုခဲ့ပါတယ်။ ရာသီလာပြီး ၇ ရက်အတွင်းနဲ့ ရာသီမလာခင် ၇ ရက်အတွင်း အတူနေရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့ပါ။ ဆက်ဆံပြီး Ecee2 သောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်နေ့ ကျတော့ ထပ်ဆက်ဆံပါတယ်။ သူ့သုတ်ရည် အနည်းငယ်တော့ ဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲတာ ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ပါသလား။ ရက်ရှောင်နေရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား။ ဆေးသောက်ဖို့ရော လိုပါသလား။
Q 3: ကျွန်တော့ အသက် ၂၇ ရှိပါပြီ။ မိန်းမ ရာသီလာပြီးတဲ့ နေကစပြီး ၇ ရက်နဲ့ မလာခင် ၇ ရက်အတွင်းကို ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန် ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။ ရာသီလာပြီး ၇ ရက်၊ မလာခင် ၇ ရက် အတွင်း ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား သိချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးကို အမြဲသုံးနေရင် ကလေးလိုချင်တဲ့အခါ အခက်တွေ့နိုင်ပါသလား။
၁။ Progestin-only pills (POPs) = Plan B = Emergency contraception (EC) = Emergency contraceptive pills (ECPs) = Morning-after pill = Day after pills
လိင်ဆက်ဆံပြီး မြန်မြန်သုံးလေ စိတ်ချရလေဖြစ်တယ်။ ဆက်ဆံအပြီး ၅ ရက်အတွင်း သုံးနိုင်တယ်။ ၂၄ နာရီ အတွင်း သောက်ရင် ၉၅%၊ ၂၄-၄၈ နာရီအတွင်းသောက်ရင် ၈၅%၊ ၄၈-၇၂ နာရီအတွင်းသောက်ရင် ၅၈% စိတ်ချရတယ်။ ၅ ရက်အတွင်းလဲ သောက်နိုင်တယ်။ % မရှိသေးဘူး။
Progestin (Levonorgestrel) 1.5 mg တလုံး တကြိမ်တည်း ဒါမှမမဟုတ် 750 μg နှစ်ခါခွဲ သောက်နိုင်တယ်။ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေက ပျို့တာ၊ အန်တာ၊ ရင်သား တင်းတာ။ တချိ့ အမျိုးသမီးတွေက နေမကောင်းတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါ။ ဆက်ပြီး ကာကွယ်လိုရင် အခြားနည်းတွေကို သုံးရပါမယ်။ RU486, Mifestone, or Mifeprex တို့လို သားပျက်စေတဲ့ ဆေးမဟုတ်ဘဲ သန္ဓေ မတည်အောင်သာ လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။
• တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သော Progestin-only ဆေးများ = Ai Wu You, An Ting 0.75, An Ting 1.5, Bao Shi Ting (Postinor-2, 0.75 mg), Bao Shi Ting 1.5, Dan Mei (0.75 mg), Dan Mei (1.5 mg), Hui Ting 0.75 mg Hui Ting 1.5 mg, Jin Xiao (0.75 mg), Jin Xiao (1.5 mg), Jin Yu Ting, Ka Rui Ding, Le Ting, Nuo Shuang, Xian Ju, Yi Ting, Yu Ping, Yu Ting,
• တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သော Mifepristone ဆေးများ = Bi Yun (10 mg), Bi Yun (12.5 mg), Fu Nai Er (10 mg), Fu Nai Er (25 mg), Hou Ding Nuo (10 mg), Hou Ding Nuo (25 mg), Hua Dian (10 mg), Hua Dian (25 mg), Si Mi An (10 mg), Si Mi An (25 mg)
• အိန္ဒိယတွင်ရနိုင်သော Progestin-only ဆေးများ = E Pills, i-pill, Preventol, ECee2, Pill 72
• မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရနိုင်သော Progestin-only ဆေးများ = ECee2, Pill 72
• ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရနိုင်သော Progestin-only ဆေး = Postinor (Thailand), Madonna (Thailand)
• စင်္ကာပူမှာရနိုင်သော Progestin-only ဆေးများ= Postinor-2®, Estinor®, Norlevo®
• စင်္ကာပူမှာရနိုင်သော Contraceptive Patch ကိုယ်ဝန်တား ကပ်ခွါဆေး = Ortho Evra® (6 mg Norelgestromin and 600 micrograms Ethinyl estradiol transdermal patch) ရာသီစဆင်းတဲ့ရက်ကနေ ကပ်ထားပါ။ ပဌမ ၃ ပါတ်မှာ တပါတ် တကပ်၊ နောက်ဆုံး၁ ပါတ် ကပ်စရာ မလိုပါ။
၈၉% ထိရောက်တယ်။ RU486, Mifestone, or Mifeprex တို့လို သားပျက်စေတဲ့ဆေး မဟုတ်ဘဲ သန္ဓေ မတည်အောင်သာ လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်း။ နေမကောင်း ဖြစ်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ရင်သား တင်းခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါ။ ဆက်ပြီး ကာကွယ်လိုရင် အရေးပေါ် ဆေးအပြင် တခြားနည်းတွေကိုပါ သုံးဘို့လိုတယ်။
၂။ Combined oral contraceptive pills (COCs) ပုံမှန် အများသုံး တနေ့တလုံးသောက် ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲပါဆေးများ
လိင်ဆက်ဆံပြီး ၅-၈ ရက်အတွင်း သုံးနိုင်တယ်။ ၉၉% စိတ်ချရတယ်။ တာရှည် (၃-၅ နှစ်) ကာကွယ်နည်းလဲ ဖြစ်တယ်။
၄။ ရက်ရှောင်နည်း Standard Days method သို့မဟုတ် Calendar method ပြက္ခဒိန်နည်း
ရက်ရှောင်နည်းဟာ အကုန်အကျ အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်။ မတော်တဆ ကိုယ်ဝန် ရနိုင်နှုန်းလဲ မြင့်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ ဆန္ဓပြည့်ဝမှုကို အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေသလို၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလည်း မရှိပါ။ ရာသီ စလာတဲ့ ရက်ကနေ တွက်ရင် လလယ်ရက် ဖြစ်တဲ့ ၁၄-၁၅ ရက်မှာ မ-မျိုးဥအိမ်ကနေ မျိုးဥထွက်တယ်။ မ-မျိုးဥနှင့် ကျားသုတ်ပိုးတို့ တွေ့ဆုံ-ပေါင်းစပ်ပြီး၊ သားအိမ်ထဲမှာ တွယ်ကပ်နိုင်မှသာ ကိုယ်ဝန်ရစေတယ်။ ရာသီစလာပြီး (၇) ရက်အတွင်းနဲ့ရာသီ မလာခင် (၇) ရက် အလို ရက်များဟာ ကိုယ်ဝန် မရှိနိုင်တဲ့ ရက်တွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ပြောတာ အကြမ်းဖျင်း ပြောတာပါ။
The Institute for Reproductive Health သုတေသနအရ တိတိကျကျ ပြောရရင် -
၅။ သုတ်ရည် ပြင်ပစွန့်ထုတ်နည်း Withdrawal
ယောက်ျားက ဆန္ဒပြည့်ဝခါနီးမှာ ကျား-အင်္ဂါကို အမျိုးသမီးရဲ့ မိန်းမကိုယ်အတွင်းကနေ ထုတ်ပြီး၊ သုတ်ရည်ကို အပြင်မှာ ထွက်အောင် လုပ်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ကြာစေချင်လို့ စိတ်ကို ထိန်းထားနိုင်အုံးတော့ သုတ်ကောင် Sparm နဲနဲဖြစ်ဖြစ် အထဲမှာ ထွက်သွားတတ်တယ်။ ဒီနည်းကြောင့် ၁၅-၂၈% ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။ Sparm 2.5 ml မှာ သုတ်ကောင်ရေ သန်း ၅ဝ ပါနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျားသုတ်ပိုးသတ်ဆေး Spermicide နဲ့ တွဲသုံးရင် ပိုထိရောက်တယ်။
ရာသီမလာခင် ၇ ရက်ကနေ လာပြီး ၇ ရက်အတွင်းမှာ ဆက်ဆံရင် သီအိုရီအရ ကိုယ်ဝန် မရနိုင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်တားဆေး သုံးပြီးတဲ့နောက် ကလေးယူချင်ရင် ရနိုင်ပါတယ်။ ဆေးတွေက ၁ လအတွက်ဆေးနဲ့ ၃ လအတွက် ဆေးတွေသာ ဖြစ်တယ်။ ဆေးသုံးတာကို ရပ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ဝန်မဆောင်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါ။
ဒါပေမဲ့ တချို့အမျိုးသမီးတွေက ဆေးရပ်လိုက်တာနဲ့ နောက်လကစပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ်။ တချို့က အချိန်ကာလ တခုကို စောင့်ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တယောက်နဲ့တယောက်က သူ့သဘာဝအတိုင်း ဟော်မုန်းအခြေအနေ ပြန်ရောက်အောင် အချိန်ယူတာချင်း မတူကြလို့ပါ။ တချို့ဆိုရင် ၁ လ မဟုတ်ဘဲ ၁ နှစ်အထိ အချိန်ယူတာလဲရှိတယ်။
ကောင်းတာက အမျိုးသမီးဟာ ဆေးမကူဘဲ သဘာဝအတိုင်း ရာသီ ၂ လ၊ ၃ လ ပြန်ဆင်းပြီဆိုမှ ကလေးယူတာ ပိုကောင်းတယ်။ ဒီကြားကာလမှာ (ကွန်ဒွမ်) နည်းစတာကို သုံးရမယ်။ ဟော်မုန်းအပိုတွေ မရှိတော့ဘဲ၊ နောက်ကိုယ်ဝန်မှာ ဘာမှ သက်ရောက်မှု မရှိစေတော့ဘူး။
ဟော်မုန်းပါတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေ မသုံးတော့တာတောင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သေးတာကတော့ ရပ်လိုက်ပေမဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာ အခိုက်အတန့်အားဖြင့် သက်ရောက်မှု ဆက်ရှိနေနိုင်သေးလို့ ဖြစ်ရတာပါ။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ စားဆေးသုံးသူဆိုရင် အများအားဖြင့် ၂လ၊ ၃ လ နောက်မှ ကိုယ်ဝန် ပြန်ရနိုင်တယ်။ Depo-Provera ထိုးဆေး ဆိုရင် ၆ လ၊ ၁ နှစ်ကြာမှ ကိုယ်ဝန် ပြန်ဆောင်တတ်တယ်။ ဒီကြားကာလမှာ သွေးမဆင်းဘဲနေတာလဲ ရှိနိုင်သေးတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဝယ်ရတယ်လို့သိရတဲ့ Postinor ဆိုတာက Postinor-2, Postinor Duo နာမယ်တွေနဲ့ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ရှိတယ်။ ဆေးတကပ်မှာ ၂ လုံးပါတယ်။ ဒီဆေးမျိုးထဲမှာ 1.5 mg levonorgestrel ပါတယ်။ ဆက်ဆံအပြီး ၃-၅ ရက် အတွင်း သောက်ရမယ်။ Postinor 1, Postinor2 Unidosis နာမယ်နဲ့ ဆိုတာက ဆေး ၁ လုံးထဲသာပါတယ်။ ဆေးပါတာကတော့ 1.5 mg of levonorgestrel အတူတူဘဲ။ Postcoital high-dose progestin-only oral contraceptive pills လို့ဆေးစာနဲ့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်ကို တိတိကျကျ လိုက်ဘို့ လိုတယ်။ ဆက်ဆံတဲ့အကြိမ် နည်းသူတွေသာသုံးသင့်တယ်။ ဒီဆေးကို ပုံမှန်သဘော သုံးသူတွေမှာ တနှစ်အတွင်း ကိုယ်ဝန် ရနိုင်မှာ ၂ဝ % ရှိတယ်။ Yuzpe regimen ကို အဲလိုသုံးရင် တနှစ်မှာ ၄ဝ% ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရေးပေါ်သာ ကောင်းတာမို့ ဖြစ်တယ်။
Unwanted-72 အိန္ဒိယမှာ တီဗွီကနေ ကြော်ညာနေတဲ့ အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေး
1. UNWANTED-72 ဆိုတာ ဘာဆေးလဲ။
မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်အတွက် အရေးပေါ်စားဆေးဖြစ်တယ်။
2. ဘယ်အခြေအနေမျိုးတွေမှာ သုံးနိုင်သလဲ။
• ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ မထိရောက်တဲ့အခါ။
• သားအိမ်ထဲထည့်ထားသည့် ပစ္စည်း IUD ထွက်ကျသွားတဲ့အခါ။
• (ကွန်ဒွမ်)မသုံးမိတဲ့အခါ၊ (ကွန်ဒွမ်) ပေါက်ပြဲသွားတဲ့အခါ။
• အလိုမတူဘဲ ပြုကျင့်ခံရတဲ့အခါ။
3. မည်သို့ မည်သည့်အခါ သုံးမလဲ။
UNWANTED-72 Tablet ကို ဆက်ဆံအပြီး ၇၂ နာရီအတွင်းသုံးပါ။ မြန်လေထိရောက်လေဖြစ်သည်။
• လစဉ်မျိူးဥ မထွက်မီသောက်ရင် မျိုးဥအိမ်မှ မျိုးထွက်မလာနိုင်။
• လစဉ်မျိူးဥမထွက်ပြီးချိန် သောက်ရင် ကျားမျိုးဥ(သုတ်ပိုး) နဲ့ မပေါင်းစပ်စေနိုင်။
• ကျားမျိုးဥ (သုတ်ပိုး) နဲ့ မပေါင်းစပ်ပြီးချိန်သောက်ရင် သားအိမ်မှာလာရောက်မတွယ်စေနိုင်။
5. UNWANTED-72 ဆေးရဲ့ မကောင်းကျိုးများ
• ရာသီဆင်းခြင်း ပုံမမှန်ဖြစ်တတ်သည်။
• ပျို့-အန်ချင်မည်၊ ခေါင်းကိုက်-ခေါင်းမူးနိုင်၊ ရင်သားတင်းစေနိုင်သည်။
6. ဒီဆေးကို ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်မရှိစေရန် သုံးနိုင်သလား။
7. ၁ ခါမကသုံးနိုင်သည်။ အရေးပေါ်မှသာ သုံးသင့်သည်။
8. အန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
9. တခြားဆေးတွေနဲ့ ပြဿနာရှိသလေား။
တီဘီဆေး၊ အတက်ပျောက်ဆေး၊ ပွေးဆေး၊ မှိုဆေး တို့နှင့် ရောပြီးမသောက်သင့်ပါ။
10. နို့တိုက်မိခင်များ သုံးနိုင်သလား။
11. STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်သလား။
STDs တွေကို မကာကွယ်နိုင်ပါ။
12. လစဉ်ရာသီကို သက်ရောက်သလား၊
သက်ရောက်နိုင်သည်။ စောလာနိုင်သလို နောက်လည်းကျနိုင်သည်။
13. ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဟု ယူဆပါက ဒီဆေးကို သုံးနိုင်သလား။
ရတီ July 18, 2013 at 8:26 AM
ကိုဝန် ဖျက်ချချင်ရင်ရော ဘာဆေးတွေများ ရှိသလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်
ကိုဝန်ဘယ်နှလ ရသွားရင် ဖျက်ချဖို့မဖြစ်နိုင်ပါသလဲ
​ကေသွယ်​ April 4, 2014 at 1:41 AM
Cytotus ဝယ်​ပါ Vugina ထဲမှာ ၁၂ ခြားတစ်​ခါ နှစ်​လုံးထည့်​ပါ
Ko Chit December 24, 2014 at 9:07 AM
Thura Hlaing September 18, 2015 at 10:50 PM
Myo Lay December 10, 2015 at 4:44 AM
Ken Bo February 29, 2016 at 2:21 AM
ကိုယ်​၀န်​ 1လ ​ပျက်​ချင်​ရင်​ဘာ​ဆေး​သောက်​ရမလဲ
Ken Bo February 29, 2016 at 2:24 AM
Jimmy Thaw February 22, 2017 at 12:01 PM
red lion March 12, 2016 at 7:37 PM
red lion March 12, 2016 at 7:40 PM
Kaung Myat May 3, 2016 at 7:39 PM
အကို cytotec ကဘယ်ကဝ်တာလဲ
ကစ်​ ကစ်​ April 10, 2016 at 7:32 AM
ကိုယ်​ဝန်​ရှိမရှိ ဆီးစစ်​ခြင်းက ဘယ်​အချိန်​မာ စပြီး စစ်​လို့ရပါသလဲဆရာ
Unknown August 16, 2016 at 8:22 AM
ရာသီလာမဲ့ရက်ကို မလာရင်​ ကိုယ်​ဝန်​ရှိနိုင်းပါသလား တစ်​ကယ်​လို့များ ကိုယ်​ဝန်​တစ်​လရှိ​နေလို့ ဖျက်​ချခြင်​ရင်​ ဘယ်​​ဆေး​တွေးကို​သောက်​သင့်​ပါသလဲ
ကိုယ်ဝန် ပျက်ချင်တဲ့အချိန် ဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုး ကြိုဖြစ်လဲ ဆရာ သိချင်လို့ပါ စိတ်လဲပူနေလို့ပါ
Linn Khat October 10, 2016 at 11:50 PM
​ဆေးလုံးတလုံးတည်းပါတဲ့ ကိုယ်​၀န်​တား​ဆေးကိုတကြိမ်​ထဲ​သောက်​လို့မရဖူးလာဗျာ အဲ့​ဆေးက၇၂နာရီအတွင်း ​သောက်​လို့ရပါသလားသိချင်​လို့ပါ
Hate Prince December 14, 2016 at 4:51 PM
ဇော် လေး May 8, 2017 at 12:43 AM
ဆရာကျ​နော်​ ​​ကောင်​မ​လေးမှာ ကိုယ်​ဂန်​ ၂လ ပြည့်​​တော့မယ်​ သူက အခု​ကျောင်း တတ်​​နေလို့ ယူလို့ မဖြစ်​​သေး ဘူး အဲ့တာ ဘာ​ဆေး ​သောက်​ ရမာလဲ သူက အ​ဝေးမာ​ရောက်​​နေလို့ပါ ​ပြောပြခဲ့ ပါ​နော်​ ဆရာ ​ကျေးဇူး တင်​ပါတယ်​
Anonymous June 8, 2017 at 7:46 AM
​ကောင်​မ​လေးင ​ကျောင်းသူမို ယူလို့မရ​သေးလို့
khin oo August 12, 2017 at 6:44 AM
ကို​၀န်​၃လပြီ​ဆေးထုိပြီဖျက်​ချလို့ရလားသိချင်​လို့ပါ ဘ်​လို့Side effect ​တွေဖြစ်​နု​င်​လဲအသက်​အန္တ၇ာ်​စိုိးမ်​ရလားအေ၇ကြီးလို့ပါအခု​မေးတာအိမ်​​ထောင်​သည်​ပါယယ:)ယယ